आफ्नो बच्चा को जन्म अगाडी देख एक विशाल संग हरेक महिला। र जन्म समय नजिकै छ जब expectant आमा बुझ्न प्रयास गरिएको छ, तर त्यो श्रम सुरु गर्न बारेमा छ भनेर भन्छन् कि के आशा गर्नुभयो?
श्रम को शुरू को harbingers के हुन्? को furthest, तर को चूक एक precursor मानिन्छ पेट गर्भवती। यो जन्म नै अघि बारे 2-3 हप्तामा हुन्छ। के यो समय समयमा शरीर हुन्छ? एकदम बढेको गर्भाशय बारेमा 2-3 सेमी द्वारा कम छ, पेट नै एक sloping गर्भवती हुन्छ आफ्नै साँस को राहत अनुभव हुन सक्छ। तपाईं कसरी थाह तल पेट? एक sloping गर्न साथै, भुँडी र छाती सजिलै हात सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ बीच अब छ। तपाईं पनि श्रोणि को क्षेत्र मा केही दबाव महसुस गर्न सक्छन् perineum। पेट बच्चा को हटाइ दृढ को pelvic हड्डी बीच उनको टाउको फिक्स पछि किनभने यो सबै राम्रो र अब उहाँले मात्र आफ्नो हतियार र खुट्टा सार्न सक्छ। यो भन्दा बढी रोल सफल छैन। लगभग सबै छोड्न तयार छ।
अब, अझ कच्चा उपाय। खकार को छुट्टी प्लग - एक लक्षण हो। श्रम शुरू एकदम नजिक छ। तर पानी छुट्टी संग भ्रमित हुन छैन, यो श्रम पूर्ण बिभिन्न संकेतक छ। श्लेम लाग्एको प्लग श्रम को शुरू अघि बारे 2-5 दिनको लागि विस्तार। यसलाई हल्का खैरो वा yellowish रंग हुन सक्छ, कहिलेकाहीं रगतले streaked। स्थिरता यो पानी छैन, तर खकार, एक तरल छैन। यो घटना को PERIODICITY फरक हुन सक्छ, तर औसत ट्यूब केही दिन बारेमा 1-2 चमचा को समूहहरु मा विस्तार। के गर्भवती? प्लग उत्प्रेरित छ भने, यो, तपाईं जन्म अन्य harbingers देख, अवलोकन गर्न आवश्यक अस्पताल जान कुनै अर्थमा बनाउँछ।
अर्को लक्षण के हुन सक्छ? वितरण सुरु गर्भवती भावनात्मक परिवर्तनहरू सँगसँगै गर्न सकिन्छ। श्रम लागि महिलाको शरीर तयार छ कि हर्मोन को सबै दोष। हाँसो दिन्छ आँसु, भय प्रतिस्थापन गर्न आउँछ जो यूफोरिया, तरिका - एक बच्चा को आसन्न जन्म संकेत हुन सक्छ।
एक सानो वजन - अर्को लक्षण। श्रम नजिक को शुरू भएको, र शरीर सबै यो interferes कि अतिरिक्त गिर, प्रक्रिया लागि तयारी। उदाहरणका लागि, एक महिला शरीर खाली अतिरिक्त तरल पदार्थ देखि पखाला सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, थप अक्सर urinate सक्छ - त्यसैले intestines सफा। यो शरीर विज्ञान गलत केही छ।
महिला श्रम को शुरू को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संकेत - यो लडाइँ। त्यहाँ तथाकथित छन् प्रशिक्षण पल्ट, को साँझमा उत्पन्न र एकदम पीडादायी हुन सक्छ जो। यसरी शरीर सबै सुरु गर्न, आमा बारेमा छ भन्ने संकेत - तयार! contractions मासिक पत्रिका बन्न भने - यो थप ध्यान आवश्यक छ। त्यसैले तिनीहरू हरेक 2-3 मिनेट बारम्बार भने, आफ्नो बैग प्याक र डाक्टर जाने गर्नुपर्छ।
पानी - अर्को लक्षण। श्रम शुरू भएको पानी छुट्टी प्रारम्भ गर्नु, या शायद सक्छ। यो कुरा पानी सार्न झगडे विभिन्न चरणमा अघि र मा दुवै गर्न सक्ने छ। र अग्रिम लीक सुरु हुन सक्छ। यो पनि ध्यान लायक छ। जहाँ डाक्टर एक एकदम दर्दनाक contractions mechanically amniotic बबल punched पहिले नै हो असामान्य अवस्था, त्यहाँ केही पनि हुन्छ गलत छ।
बच्चालाई गरेको सेक्स तपाईं कसरी थाह
गर्भावस्था को समयमा 3D अल्ट्रासाउंड
परम्परागत र आधुनिक लिपि - दुलही Courting। दुलही द्वारा विवाहपूर्वको समयमा के गर्न?
सपना के हो
डिजाइन र विनिर्देशों "शेवरलेट स्पार्क"